Tsia 4 Autumn 2017 - The Reward Reward
Home Tsia. 4 Autumn 2017
"Ny fotoanan'ny alina dia tsara tarehy" araka ny filazany azy ireo amin'ny fararano. Mba hamadihana ny sainareo amin'ny hevitra mafana kokoa, eto dia tantara vitsivitsy sy vaovao momba ny The Reward Foundation sy ny asa ataonay nandritra ny volana vitsy lasa. Tsy nampiditra ny zava-drehetra nataonay izahay tahaka ny efa novakianao ireo tantara efa ao amin'ny vaovao isan-kerinandro ao amin'ny tranonkala na ao aminay Twitter omeo hanina.
Maniry anao ho vanim-potoana fety mahafinaritra rehefa tonga. Fiadanana sy fitiavana ho anao rehetra avy amin'ny olon-drehetra ao amin'ny The Reward Foundation.
Fanekem-pihavanana RCGP ho an'ny valisoa valisoa
Ny atidohanao amin'ny pôrnôgrafia nataon'i Gary Wilson
"Faritra vaovao amin'ny fitsaboana" - Konferansa momba ny fahasalamana ho an'ny tanora RCGP
TRF Research navoaka
Ivotoerana fanendrena ho an'ny tanora sy ny heloka bevava
Fifandraisana Scotland - Fampiofanana ara-pananahana ara-pananahana ho an'ny mpivady
Fikambanana Edinburgh Medico-Chirurgical (naorina 1821)
Fikambanana ho fampandrosoana ny fahasalamana ara-nofo (SASH)
Fikambanana Youth Theatre, Wonder Fools dia maka amin'ny Porn ao amin'ny The Coolidge Effect
Ny Fondation Entrée dia neken'ny Royal College of General Practitioners mba hanolotra fanofanana momba ny fianarana matihanina (CPD) ho an'ny toeram-pitsaboana mikasika ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet momba ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana. Ny taratasy fangatahana dia manitatra ny mpikambana avy amin'ny Royal Colleges any Angletera sy Irlandy.
Hamafantsika ireo atsy ho atsy amin'ny andro atsy ho atsy. Ny tsirairay dia ho mendrika ny sanda CPD 7. Ny mpitsabo, ny mpitsabo ary ny mpitsabo dia mandray. Amin'ny maha-pharmacists azy dia tsy maintsy samborina ny olona hanome torohevitra momba ny fahasalamana ho an'ny lehilahy mitady fitsaboana tranainy noho ny dysfunite erectile, hiara-miasa amin'izy ireo ihany koa. Ny drafitra dia ny manomboka ny atrikasa amin'ny volana Janoary. Tandremo ny antsipiriany. Raha te hahazo fampahalalana bebe kokoa momba ny atrikasa mandritra ny fotoana fohy ianao, dia mifandraisa azafady mary@rewardfoundation.org.
Ny atidoha amin'ny pôrnôs nataon'i Gary Wilson
The fanontana faharoa Ity boky tsara sy mahatalanjona ity dia efa misy.
“Ny ati-doha amin'ny pôrnôgrafia dia voasoratra amin'ny fiteny tsotra mazava mifanentana amin'ny manam-pahaizana sy ny olon-tsotra ary miorim-paka ao anatin'ny fitsipiky ny neurosains, ny psikolojia momba ny fitondran-tena ary ny teôlisiona miova… ary azoko hamafisina fa ny fanadihadian'i Wilson dia mifanaraka tsara amin'izay rehetra hitako. ”
Profesora Frederick Toates, Open University, mpanoratra Ny faniriana hanao firaisana ara-nofo: ny fangataham-panenenana.
Ao amin'ny 2014, rehefa Ny atidoha amin'ny pôrnôs dia navoaka voalohany, sary vetaveta an-tserasera ary solosaina teknolojika hafa ho an'ny fifandraisana amin'ny olona izay tsy dia hita loatra amin'ny adihevitra ampahibemaso. Hatramin'izay fotoana izay, ny kolontsaina lehibe dia nahatsikaritra tsikelikely fa ny mipetrapetraka eo amin'ny efijery na ny fametahana amin'ny headset VR dia tsy lalan'ny famotsorana ara-pananahana. Ny porofo manondro ny mifanohitra amin'izany. Ny votoatin'ny firaisana ara-nofo, azo alaina amin'ny fangatahana, ary amin'ny endriny tsy misy fetra, dia mety hampidi-doza ny olona hahasoa ny olombelona. Ny fianarana am-polo taonany dia mampifandray ny fampiasana sary vetaveta ho an'ny asa mahomby sy ny fahasalamana ara-tsaina. Ampahatelon'ny roatokom-pianarana dia mampifamadiho ny fampiasana sary vetaveta amin'ny olana ara-pananahana sy ny fihenanam-po amin'ny firaisana ara nofo. Ny dimy amin'izy ireo dia manoro ny antony mahatonga azy ireo ho voan'ny aretina amin'ny fanafoanana ny fampiasana sary vetaveta.
Mifanohitra amin'ny hevitry ny besinimaro, ny tanora dia mampiasa ny serivisy GP toy ny sokajin-taona hafa. Ny GP natolotray tamin'ity fihaonambe ity dia nilaza fa tsy mbola nametraka ny fanontanian'ny marary sasany izy ireo rehefa tojo fepetra sasany. Nilaza ny GP iray fa ny fanambarana momba ny fiatraikan'ny pôrnôgrafia dia “toy ny fahitana faritra vaovao amin'ny fitsaboana na fitadiavana taova vaovao.” Faly izahay fa niroso tsara ny fampisehoana ary nifandraika tamin'ny fomba fanao amin'ny klinika. Nilaza ny dokotera fa manolo-tena hanontany ireo fanontaniana sarotra ireo amin'ny ho avy.
Izany dia nitranga nandritra ny fihaonambe voalohany tany Ecosse momba ny fahasalaman'ny tanora. Nalefa tany Edinburgh tamin'ny 17 Novambra izy io ary nokarakarain'ny RCGP niaraka tamin'ny manam-pahaizana momba ny adolescence avy any Londres. Nisy ny mpitsabo mpanentana 40 teo amin'ny mpanatrika.
Tamin'ny Febroary 2017, nanatrika ny 4 ny ekipa TRFth Konferansa iraisam-pirenena momba ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena any Israel. Ity fihaonambe akademika ity dia nanolotra ny fikarohana farany indrindra momba ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny Internet amin'ny fitondran-tena. Noho ny maha-zava-dehibe an'io lohahevitra io amin'ny vondrom-piarahamonin'ny mpitsabo sy amin'ireo akademia mpikaroka sary vetaveta, dia nanangona lahatsoratra iray izahay hametrahana an'ity fikarohana lehibe ity ho an'ireo vondrom-piarahamonina ireo.
Pôrnôgrafia sy Firaketana Fikarohana momba ny firaisana ara-nofo ao amin'ny Kaonferansa Iraisam-pirenen'ny 4th Iraisam-pirenena momba ny Fandaniana Behoririka navoaka tao Fanampiana ara-pananahana sy fanerena an-tserasera amin'ny 13 septambra 2017. Hiseho amin'ny pirinty ao amin'ny Volume 24, Number 3, 2017. Misy kopia maimaim-poana azo amin'ny fangatahana avy amin'ny darryl@rewardfoundation.org.
Ny CEO, Mary Sharpe dia nanjary Associate of the Center for Youth & Criminal Justice (CYCJ) miorina ao amin'ny University Strathclyde any Glasgow. Faly izahay. Hoy i Mary “Manantena aho fa hanampy amin'ny fampielezana ny asa fikarohana sy ny asa fitoriana nataon'ny The Reward Foundation izany ary hanatsara ny fandraisan'anjaranay amin'ny fampandrosoana ny politikam-bahoaka any Ekosy.” Mary dia hiteny amin'ny hetsika CYCJ amin'ny 7 martsa 2018 any Glasgow nantsoina: Zana-griara sy efitra figadrana: Fihaonana amin'ny filàn'ireo tanora voajanahary izay tsy azo amboarina.
Misy antony maro mahatonga ny mpivady sasany hijery sary vetaveta. Na inona na inona antony manosika dia maro kokoa ny mpivady mikatsaka fanampiana avy amin'ireo mpitsabo mpanabe ara-pananahana ao amin'ny Fifandraisana any Ekosy. Araka ny filazan'i Anne Chilton, lehiben'ny fampiofanana any, ny adihevitra momba ny pôrnôgrafian'i 1990 dia olana momba ny 10% ny mpivady tonga haka torohevitra. Androany dia milaza fa olana ho an'ny 70% izany. Ny fampiasana sary vetaveta ivelan'ny fanaraha-maso dia lazaina ho antony fisaraham-panambadiana sy fifandraisana eo amin'ny fifandraisana amin'ny fitomboan'ny fifandraisana. Hoy izy: "Fantany ny toerana misy ny firaisana ara-nofo, fa tsy misy mahasamy hafa."
Mba hanampiana ireo mpitsabo mba hahatakatra sy hifanaraka amin'ny tontolo iainana am-pilaminana, dia nasaina hanofana ny fampiofanana momba ny fampiofanana momba ny fitsaboana farany ny mpitsabo. Ireo mpitsabo amin'ny firaisana ara-nofo dia saika efa nampiofanina manokana amin'ny psikology. Ankehitriny, ny fahatakarana ny fiankinan-doha amin'ny fitondran-tena sy ny fikarohana fikarohana momba ny neuroscience dia ampahany ilaina amin'ny fampiofanana fampiofanana momba ny fitsaboana. Manampy ny olona hahatakatra hoe ny lehilahy manokana, izay mpampiasa maintimetatra amin'ny sary vetaveta an-tserasera, dia afaka mihamitombo amin'ny karazana pôrnôgrafia vaovao ary mila fientanentanana izay tsy ahitan'ny mpifanolo-bodirindrina. Ity dia fantatra amin'ny hoe 'fandeferana' ho toy ny fiankinan-doha amin'ny fiankinan-doha.
Ny voa dia namboly efa ho telo taona lasa izay. Tamin'io fotoana io, ny minisitry ny tale Jeneralinay Mary Sharpe dia nanome famelabelarana ho an'ireo matihanina ara-pitsarana mikasika ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto ao amin'ny atidoha ary ny rohy mankany amin'ny heloka bevava ara-nofo. Tao amin'ny mpanatrika, dia efa nisotro ronono dokotera Bruce Ritson avy amin'ny hopitaly Royal Edinburgh sady mpanorina ny SHAAP (Scottish Health Action on Alcohol Problems). Gaga izy noho ny fitoviana misy eo amin'ny fiantraikan'ny pôrnôgrafia sy ny fiantraikan'ny toaka ao amin'ny atidoha. Samy manana faniriana matanjaka izy ireo izay, raha ampiasaina ao anatin'ny fotoana fohy, dia afaka manova ny atidoha sy ny asany, indrindra eo amin'ny atin'ny tsy fahampian'ny tanora. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny atidohan'ireo tanora mpampiasa pôrnôgrafika dia mamela ny valiny ho toy ny atidohan'ireo kôkainina mpidoroka sy ny fisotroan-toaka rehefa asehon'ireo sioka mitovy.
Vokatr'izany fisehoan-javatra sy fifanakalozan-kevitra manaraka izany, i Bruce Ritson dia nanasa tamim-panetren-tena ny lahateny fanokafana ny fikambanana Medico-Serikongo-pirenen'ny Edinburgh 190th fivoriana tamin'ny volana oktobra tamin'ity taona ity.
Ny dokotera dia faran'ny fitsaboana ara-pahasalamana ka mahaliana hatrany ny faritra misy ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana. Azonay ny manome ny fivoarana farany amin'ny fikarohana, anisan'izany ireo taratasy izay maneho fa na dia ny fampiasana sary vetaveta (adiny telo isan-kerinandro) aza dia mety hitakemotra ny trondro maitso ao amin'ny atidoha. Ny atidoha tanora tsy manankarena indrindra no malemy kokoa.
Amin'ny maha mpikambana mpikambana ao amin'ny Birao ny fikambanana amerikana SASH, ny tale jeneralinay Mary Sharpe dia takiana hanatrika ny fihaonambe isan-taona. Tsy enta-mavesatra mihitsy izany. Mahafinaritra ny mihaona sy miresaka momba ireo fivoarana farany amin'ny sehatra misy mpitsabo maro, mpampianatra momba ny fahasalamana sy matihanina avy any Etazonia sy any ivelany. Tamin'ity taona ity dia tany Salt Lake City, Utah izahay.
Ankoatra ireo mpandahateny tsara toy ny Profesora Warren Binford izay niresaka momba ny fikarohana momba ny fahavoazana maharitra ho an'ireo niharan'ny fanararaotana ankizy (jereo ny sary TEDx talk), nitafatafa tamin'ny filohan'ny SASH, Mary Deitch, psikology voaofana ara-dalàna momba ny zavatra niainany teo am-panaovana fifanarahana amin'ireo meloka ara-nofo. Nanadihady tovolahy iray teo an-toerana koa izahay, Hunter Harrington, (17 taona) izay mpidoroka sary vetaveta indray. Nataony iraka ny hanampy ny hafa izay voafandrika sy amin'ny toerana azo atao hisorohana ny tanora hafa tsy hiditra amin'ny ady. Ireo dinidinika namboarina dia ho hita ao amin'ny tranonkalantsika amin'ny fotoana mety.
Fikambanana Youth Theatre, Wonder Fools maka amin'ny Porn The Coolidge Effect
Ny Fondation Reward dia mpiara-miombom-pihetseham-po miara-miasa amin'ny Royal Conservatoire ao Ekosy, ny vondron'ny teatra tanora, Wonder Fools, tamin'ny famokarana ny Coolidge Effect. jereo Eto ho an'ny tantarantsika teo aloha.
Ny fivelomana an-tsehatra dia fitaovana goavana ho an'ny fanabeazana indrindra ho an'ny tanora sy ny olana manakaiky ny fony.